Maitiro ekuburitsa ma iPhone application
Mushure mekutenga yako yekutanga iPhone, iwe wakabva watanga kurodha matani eemaapps iwe aunofunga kuti anogona kubatsira. Nekudaro, mushure memazuva mashoma, iwe wakazoona kuti pamusoro pekudzora zvakanyanya inowanika nzvimbo yekuchengetera pane chako chishandiso, mazhinji maapps awakatanga kufunga kuti angave anonakidza haachanakidze, zvirinani kwete zvako. Nekudaro, iwe waizoda izvozvi uninstall iPhone app Asi, kuva mutsva kunyika yeApple, hauzive kuti ungazviite sei.
Unoti sei? Mamiriro acho ezvinhu ndeechokwadi uye ungade here kuziva kana ndikakwanisa kukubatsira? Chokwadi unodaro, usazvidya moyo. Nedare ranhasi, muchokwadi, ini ndichaenzanisira, nhanho nhanho, zvese zviitwa zvinofanirwa kuitwa kuti zvibudirire mukambani. Ini pakarepo ndinofungidzira kuti izvi zvinogoneka nenzira dzinoverengeka uye kuti, zvinopesana nekuonekwa, maitiro ekutanga haana kuomesa zvachose, kunyangwe kune avo, vakaita senge iwe, havazvione sehunyanzvi hukuru mumatekinoroji matsva.
Ipapo? Ndingaziva here kuti imi makamira ipapo? Gara zvakanaka, tora yako "iPhone na" uye pakarepo tanga kushandisa mirairo iripazasi. Ndine chokwadi chekuti pakupedzisira unozokwanisa kuzvitaurira wega kufara uye kugutsikana nezvawadzidza, uyezve, chokwadi, kuti iwe wapedzisira wabudirira mukuyedza kwako. Iwe unoti chii, isu tinotengesa?
Maitiro Ekukanzura iPhone Mapurogiramu kubva Kumba Screen uye App Raibhurari
Maitiro ekudzima maapplication eApple kubva kuZvirongwa
Sei uninstall iPhone maapplication otomatiki
Maitiro ekudzima maapplication eApp kubva pakombuta
Maitiro ekudzima akabhadharwa maapplication kubva ku iPhone
Kuti titange, ngatione kuti tozviita sei. uninstall iPhone app chinguva kubva pahwindo repamba uye kubva Raibhurari yekushandisa.
Saka kutanga kwezvose, tora yako Apple smartphone, isvinure uye uende kuchiratidziro chekumba, wobva watsvaga iyoapplication icon iwe unoda kugadzirisa, pusha nemunwe wako uye ramba uchimanikidza kwemasekondi mashoma, sarudza sarudzo Bvisa maapp mune iyo menyu inovhura uye kubata bhatani Delete application kuratidza zvaunofunga.
Iyo app yaunoda kubvisa kwete pachiratidziro chekumba asi muApp Library? Wobva wasvika iyo yekupedzisira nekutsvedza chigunwe chako kubva kurudyi kuenda kuruboshwe pane yekupedzisira peji reimba skrini, wobva watsvaga iyoapplication icon referensi (kana iwe uchifunga kuti zvakafanira, unogona kubatsira nekukamuranisa muzvikamu uye / kana kunyora zita iri mumunda wekutsvaga kumusoro) uye wadzvanya pairi nemunwe wako uye ramba uchimanikidza kwemasekondi mashoma, sarudza sarudzo Delete application menyu inovhura uye inosimbisa zvinangwa zvako nekudzvanya bhatani Bvisa.
Haudi kudzima zvachose chimwe chirongwa, asi uchingoda kuti chinyangarire kubva kuchiratidziro chemusha uye uchichiendesa kuraibhurari yeapp? Izvi zvinogona zvakare kuitwa, asi yeuka kuti hazvizokutenderi kusunungura nzvimbo yekuchengetera pane yako iPhone. Chero zvazvingaitika, kuti uite izvi, pindaicon icon riripo pachiratidziro chemumba uye ramba uchimanikidza kwemasekondi mashoma, sarudza chinhu Bvisa maapp mune menyu inovhura wobva wadzvanya bhatani. Bvisa kubva pamba skrini.
Iwe unogona zvakare kusunungura maapplication pa iPhone nekuenda kuita kubva pazvirongwa yeIOS. Unozviita sei? Ndichakutsanangurira ipapo ipapo.
Kutanga, sarudza iyo icon Configurations (iyo ine chimiro che giya giya) inowanikwa pachiratidziro chemumba uye / kana muraibhurari yekushandisa, bata chinhu General iripo mune iyo nyowani skrini inoonekwa uyezve mune iyoyo IPhone nzvimbo.
Mushure mekupedza matanho ari pamusoro, runyorwa rwakakwana rweese maapplication uye data rakabatana rinotora nzvimbo yakawanda muye iPhone memory yako ichavhurwa. Iwo maapplication ari pamusoro pechinyorwa ndiwo akanyanya "bulky."
Naizvozvo, ziva kunyorera kwaunoda kubvisa uye sarudza iyo Nombre (kana zvichidikanwa, unogona kubatsira iwe kuti uiwane nekutsikirira ikoni ne girazi rinokudza iri kumusoro kurudyi uye uchinyora zita reapp mumunda wekutsvaga unoonekwa), wobva wadzvanya pamazwi Delete application kwenguva mbiri dzakateerana.
Iwe unoda kubvisa chairo kunyorera usina kudzima zvinyorwa zvaro uye data? Unogona kuita! Kuti uite izvi, ingosarudza sarudzo Uninstall Chikumbiro kaviri kubva pachiratidziro chekare.
Kana iwe uchida kudzivirira kuti ubvise maapplication pa iPhone "nemaoko", unogona kusarudza kugonesa chakakosha iOS chimiro chinokutendera kuti ubvise otomatiki Zvishoma zvakashandiswa maapplication, achisiya zvese zvakabatana zvinyorwa uye data pane chishandiso.
Kana izvi zvichikufadza, unogona kugonesa mashandiro ataurwa nekukenya pikicha Configurations (iyo ine chimiro che giya giya) uripo pachiratidziro chemumba uye / kana muraibhurari yekushandisa, nekusarudza chinhu Chitoro Chemagetsi iripo mune iyo nyowani skrini inoonekwa uye inoonekwa EN the switch padyo nesarudzo Delete maapplication ausingashandise Uye izvo zviri.
Kuwedzera kune sezvandangoratidza, iwe unogona kugonesa basa rekubvisa otomatiki kunyorera nekusarudza chinhu General pane chikuru skrini ye Configurations kubva kuIOS, wobva wadzvanya redaction IPhone nzvimbo nekubata chinongedzo Skills kuti iwe unowana padivi pechinyorwa Delete maapplication ausingashandise muchikamu Zano Inowanikwa kumusoro.
Kufungisisa kana zvichikwanisika kusunungura maapplication pa iPhone nekutora matanho futi komputa? Nehurombo, mhinduro ndeye. Munguva yakapfuura, izvi zvaigona kuitika, asi panguva yekunyora iyi dzidziso, haisisiri sarudzo kubva kuApple. Asi izvo iwe zvaunogona kuita kudzima chero mafaera ane chekuita nechero application ingave iri pane yako iPhone, iyo inogona kubatsira kana iwe uchida kudzima chaiwo maficha nekuti iwe unoda kubvisa iyo data inosangana navo.
Kuita oparesheni yakatsanangurwa pamusoro, kana iwe uine komputa Windows, unogona kushandisa iTunes, Chirongwa cheApple chepamutemo chakatsaurirwa kubata raibhurari yako yemidhiya uye zvishandiso zveIOS uye iPadOS. Kana usati warodhaunirodha uye wariisa paPC yako, ramba uchidaro pamberi, uchiteedzera rairo yezvekuita izvo zvandakapa mumutungamiri wangu panyaya iyi.
Su Mac OsKune rimwe divi, hapana chikonzero chekurodha pasi nekumisikidza chero software, nekuti zvese zvinodikanwa kubata iPhone nePad kubva pakombuta zvave kutove muhurongwa hwekushandisa Mune ino kesi, zvakadaro, iTunes haisipo, iyo yakabviswa kubva ku "standard" Mac zvirongwa senge vhezheni 10.15 yeanoshanda system (Catalina). Nekudaro, manejimendi ayo uye mabasa ekuwiriranisa ave "akaisirwa" mune chimwe chikamu cheiyo Discoverer, iyo maneja wefaira weiyo inoshanda system "Apple bite".
Izvo zvakati, kukwanisa kuburitsa zvinoshandiswa pa iPhone kubva pakombuta, kutanga kwese kubatanidza iyo "iPhone ne" kuPc kana Mac, uchishandisa iyo Tambo yemheni yakapihwa, wobva wamirira iyo iTunes kana Tsvaga hwindo kuti ivhure. Kana izvi zvikasaitika, unogona kuzviita nekusarudza iyo kubatana kuTunes yaunowana mu tanga menyu Windows kanaicon Injini yekutsvaga (iyo ine chiso chinonyemwerera) chaunowana mu dhoku bar of macos
Kana ino iri nguva yekutanga kubatanidza iPhone kune komputa, ndokumbirawo ubvumidze chinhu icho nekusarudza iyomudziyo icon iri kuruboshwe nekudzvanya bhatani Bvumidza yakaonekwa pane iTunes kana Finder skrini. Tevere, vhura iyo iPhone, tinya chinhu Bvumidza mukupindura yambiro yaunoona ichionekwa pachiratidziro uye nyora iyo unlock unlock yeApple smartphone.
Panguva ino, pinda chikamu Archive (muTunes unogona kuwana chinhu chakakodzera mune imwe menyu kuruboshwe, nepo paKutsvaga yakaiswa kumusoro), sarudza data rezvikumbiro zvaunoda kubvisa kubva pane zvakarongwa rondedzero, tinya kurudyi pane izvo, Sarudza Bvisa Mune menyu yemamiriro ezvinhu inoonekwa, simbisa zvinangwa zvako nekudzvanya bhatani Bvisa mukupindura iyo inokurumidza iyo inoonekwa pane desktop uye voila.
Wobva warangarira kudzima iyo iPhone kubva pakombuta nekudzvanya bhatani Bvisa chii chaunowana muneicon dell'iPhone muchikamu chekuruboshwe chewindo reTunes kana muwindo reKutsvaga, wobva waburitsa tambo yedhivha kubva pakombuta.
Wanga watora pasi mamwe chikumbiro chekubhadhara uye ikozvino iwe unoda kuziva kuti ungabvisa sei iwo? Ini ndinokuzivisa iwe kuti iwe unogona kuzviita nekuita iwo mamwe maitiro andatove ndatsanangura kare mumitsara yapfuura, saka uchiita kubva pachiratidziro chemumba uye neApp Library, kubva kuisheni yeIOS, otomatiki uye kubva pakombuta yako, hapana zvachose chinoshanduka uye ini Ndichakuudza zvimwe, wakagadzirira kuenda uye kuvabvisa hazvireve munzira ipi neipi kufanira kurasikirwa nekutenga kwakaitwa.
Zvese zvakatengwa kunyorera, kutaura zvazviri, zvinoramba zvakabatana neApple ID iyo yavakatengwa nayo. Nekudaro, ivo vanogona kubviswa kubva kuApple senge chero imwe yemahara kunyorera asi, kana zvichidikanwa, vanogona zvakare kudhawunirodwa, sekutsanangura kwandakaita mune yangu gwara pane iyi nyaya, pasina kubhadhara zvakare. Iyo chete kesi uko zvisingaite kuenderera kurodha pasi zvakatengwa maapplication ayo akabviswa ndipo paasisawanikwe muApp Store.
Nzira yekuodha sei kubva kuNetflix
Ungachinja sei zita rako muRocket League